Jikwaa ọsọ na ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị nke spinner gị na ụdị Bluetooth a | Akụkọ akụrụngwa
Jikwaa ọsọ na ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị nke spinner gị na ụdị Bluetooth a
Ọ tụrụ anya. Ruo oge ụfọdụ, ọ na-abụwanye ihe a na-ahụkarị ndị na-agbapụta na aka nke pere mpe, ma ọ bụghị obere, ọtụtụ akụrụngwa na-enweghị nkwụsị na enweghị nzube ebumpụta ụwa doro anya karịa izu ike nwa oge. Ma teknụzụ dị na ngwaọrụ ọ bụla, ihe egwuregwu ụmụaka ma ọ bụ ngwa nke ewepụtara na ahịa yana spinners nakweere ya na ogwe aka.
Taa, anyị na-egosi gị otu igwe nke ndị ọma, nke ndị ahụ maka ekele nke ngwa ọ nwere maka ama, na-enye anyị ohere ọ bụghị naanị ijikwa ọnụ ọgụgụ laps ọ na-eme, kamakwa ọsọ ọsọ ọ ruru. Mana ihe anaghị akwụsị ebe ahụ, ebe ọ na-enyekwa anyị ohere igwu egwu na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Dabere n'ụdị egwuregwu ọ bụ, igwu egwu n'ịntanetị nwere ike ọ gaghị abụ ihe na-akpali mmasị iji zụta ngwaahịa. BlueSpin, dị ka akpọrọ ngwaọrụ a, na-enye anyị ohere ịsọ mpi na ndị ọrụ ndị ọzọ site na ngwa ahụ, ma ọ bụghị naanị na-atụle ọsọ ọsọ kachasị na ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị mana na-echebara mgbanwe aka anyị nwere ike ime na spinner ka anyị na-atụ ya.
Netwọk mmekọrịta dịkwa na ngwa a, ebe ọ na-enye anyị ohere ịkekọrịta site na ha akara anyị nwetara tinyere ọnụọgụ laps na ọsọ ọsọ. Ugbu a ị nweghị ike ịzụta ngwaọrụ a, ị nwere ike idobe ya naanị mgbe mkpọsa ahụ malitere Indiegogo.
N'oge mkpọsa ahụ amalitebeghị, ọ nwere ike ịme ya n'isi ọnwa na-abịa, dị ka Verge si kwuo. Ọnụ nke spinner ọ bụla ga-abụ $ 49 na onye nrụpụta ga-amalite izipu ngwaọrụ mbụ na Septemba afọ a. Iji mezuo ihe a, mkpọsa ahụ chọrọ ọ dịkarịa ala $ 20.000.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Jikwaa ọsọ na ọnụ ọgụgụ nke ntụgharị nke spinner gị na ụdị Bluetooth a
Nwere ike ibi na smartphone euro 50? Nke a bụ ahụmịhe anyị
Sony nzo ozo ozo na vinyl records